Kuhle kakhulu ukubona ukufa kwakho ephupheni. " Abaninzi bokwesaba baqala ukufumana iziphumo ezibalaseleyo kwikamva elizayo. Kodwa enyanisweni, yonke into ayinakulinganiswa. Yile ndlela abaphathi bezinto ezingaziwa kunye nabanye behlabathi basichazela le ngxaki ngamaxesha ahlukeneyo.
La maphupha aneenjongo ezilungileyo nezimbi. Okulungileyo: ukuba ucinga ukuba ufile, ngoko ku futshane uza kuba nethuba lokuqalisa ubomi kwiphepha elicocekileyo. Musa ukwenza nantoni na le nto, jonga nje ukuphumla kwaye usebenzise onke amathuba anikezelwa kuwe ngobomi. Mbi: ukuba ubonile kwiphupha lakho okanye ukufa komnye umntu, ngoko umntu sele esetyiweyo kumntu osondeleyo kuwe okanye isiqalekiso kuya kuhlawulwa kungekudala (ukuphazamiseka). Ukuze uzikhusele, zama ukuthulula ioli epanini, uthele ityuwa apho uze ufake idayu eluhlaza phezulu. Ngomso olandelayo, qhawula iingubo kwaye ubeke abantu kufuphi nawe.
Incwadi YasePersian Dream Dream yaseTafisi
Ukuba umntu ubona ukufa kwakhe ephupheni, ngelixa ekhaya, ngoko uhambo olude okanye ukuhamba.
Ukuba umphuphi akakho, ngoko unokubuyela ekhaya ngaphambi kokucwangciswa.
Ukuba iphupha elinjalo lixhomekeke kwisigulane, ngoko uya kuvuka ngokukhawuleza.
Ukuba lowo uphuphayo usejele, ngokukhawuleza uza kushiya iindawo zokuvalelwa kwaye ekugqibeleni uyakwazi ukuphuma kwikamelo ngokuthanda.
Ukuba wena okanye esinye sezihlobo zakho uphupha amaphupha ofileyo, yile isilumkiso sephupha. Uya kufuneka ujamelane novavanyo olunzima, mhlawumbi ukulahlekelwa.
Ukuva okanye ukubona ephupheni umhlobo-ofile-kwiindaba ezimbi.
Kumntu obona ukufa kwakhe ephupheni, iphupha lithunyelwa ngesimo sesilumkiso. Ukuthetha ephupheni kunye noyise osele efile ucinga ukucinga ngokushishino kunye nayo yonke into edibene nayo. Ukulala kululeka malunga neengcinga eziqulunqwe ngumntu onxamnye nawe.
Amadoda nabasetyhini, emva kokubona iphupha elinjalo, kufuneka bacinge ngokucokisekileyo ngokuziphatha kwabo, kwaye baxabise idumela labo.
Ukuthetha kwiphupha nomama oshonile kukufowunelwa ukulawula izilingo zakho, qaphela impilo. Ukuthetha nomzalwana osweleyo kukubonakalisa ukuba umntu uyayifuna imfesane yakho kunye noncedo lwakho.
Ukuba umntu ofile sele evuya kwaye evuya kwiphupha - oku kuthetha ukuba ubomi bakho buhlelwe ngokungafanelekanga. Kwixesha elizayo, kukho ukwenziwa kweefayile ezinzulu eziza kuba nefuthe ngqo kwi-destiny yakho yonke, ukuba awuhlanganisi ukuthanda ngexesha lokuziphelisa.
Ukuba kwincoko kunye nesihlobo esifileyo, lowo u kushaya ngesinye isithembiso sisilumkiso sokuba uza kutshatyalaliswa ngokukhawuleza ukuphelelwa yithemba. Kuya kuba nexesha lokuhla kwezoshishino, ngoko kufuneka uphulaphule ngokucokisekileyo ukucebisa iingcebiso ngezilwanyana kunye nabahlobo.
Ilizwi ephupheni elivela kwisihlobo esifileyo yindlela yokwenene yokuxwayisa ukuba imikhosi yangaphandle iyakuthuma kusasa elizayo. Indlela yodwa le ngcaciso ingaqondwa ngumbongo wakho wokulala.
I-Paracelsus ineengcebiso-ngokuqwalasela okukhethekileyo kunye nokunyaniseka ukunyanga okuthandwa ngabantu abafayo ephupheni. Umntu olele uyakwazi ukufumana iingcebiso kumntu oshonile ebuthongweni. Amava asebenzayo abonisa ukuba ukulandela kwabo kuletha iziphumo ezifunwayo. Umfanekiso womntu osweleyo osondeleyo ukhuthaza kuphela iindawo zokulala zeengqondo kwaye uzisa phezulu ulwazi nolwazi olufihliweyo kuzo.
Ukuphupha kokufa kwakho kukubonakalisa ukuba uya kuba nobomi obude obusondelene nomhlobo wakho. Iphupha elinjalo lithetha ukuba uphethe isiphephelo somthunywa kaThixo kulo mhlaba.
Ukuba uphupha ukufa komntu obaluleke kakhulu kwihlabathi, ke oku esi siprofeto esikhulu. Kungekudala kwelinye lamazwe athuthukileyo umbusi ohlakaniphile uya kuvela emandleni, akwazi ukubeka uxolo phakathi kwabemi bamazwe ahlukeneyo.
Ukubona kwiphupha ukufa kwabantu abaninzi ngelo xesha kukubi kakhulu. Iphupha elinjalo sisiprofeto sesibhubhane esibi, ngenxa yezigidi zabantu abemi baya kubhubha. Iyeza ezivela kwizifo ezinjalo ziya kufumaneka ngumntu, ongabonanga mntu.
Ukubona umntu ofa ngokufa kabuhlungu ngumfuziselo wemfazwe yenyukliya olwa ngumlawuli wexesha elizayo kwelinye lamazwe aseYurophu athuthukileyo. Ngenxa yolu hlobo lwemfazwe, i-state enkulu iya kutshabalala ebusweni bomhlaba, kwaye abasindileyo baya kufa ngokukhawuleza okanye emva koko baya kufa ngokukhawuleza.
Ukuba uphupha ukuba ungoko lokufa kwekliniki, ngoko unesikhathi eside ukuba ube semnyama malunga nezicwangciso ezimnyama zabantu owaziwa nabo. Ngelishwa, baya kuba nako ukuguqulela izicwangciso zabo ngokwenene, kwaye uya kubandezeleka ngenxa yoko.
Ukuphupha ukufa kwakho kuthetha ukuba uza kuhlala ixesha elide. Ukuba uphupha ukuba umntu osondeleyo kuwe ufile okanye ufile, oku kubungqina bokuba lo mntu uya kuhlala ubomi obude kwaye obonwabileyo.
Ukubona ephupheni ukufa nokuhlupheka kwabantu abaninzi ngelo xesha kuyimpawu yokuba uluntu lulungiselwe ukuhlala ixesha elide. Ukuphela kwehlabathi, ekuthethwa ngayo ngabanye ngoku, akuyi kufika kwiminyaka embalwa elandelayo.
Ephupheni, ukubona ukufa komntu obalulekileyo kunye nodumileyo emhlabeni jikelele kwisiprofeto sokuphazamiseka nokukhathazeka emhlabeni. Kwixesha elizayo, kunokwenzeka ukuba umntu obaluleke kakhulu uya kufa. Emva kokufa kwakhe, ngokukhawuleza uqala umzabalazo onamandla wobukhosi, oye waba yinto enkulu yemfazwe okanye yemfazwe yehlabathi.
Ukuzibona kwiphupha elifa ukufa okubuhlungu kukubi. Iphupha elinjalo lithetha ukuba kwixesha elizayo umntu uza kubonakala emhlabeni oza kuthatha ubomi kubantu abaninzi ngaphambi kokufunyanwa. Iphupha elifana nalokhu liqikelela ukuhlangana ngokukhawuleza nomntu onobukrakra, mhlawumbi nangomdaka.
Ukuzibona ephupheni kwindawo yokufa kweklinikhi yesikhashana kuthetha ukuba into eyenzeka kuwe kungekudala iza kukukhupha iminyaka emininzi. Ngexesha elithile uzakukhathalela ukuba kwenzekani kwihlabathi, kwilizwe, kwintsapho yakho.
Intsingiselo yobuthongo: iphakame iifalesi
Phatha iphupha malunga nolwandle
Iibhatatesibhaka eziphekwe ngama-chanterelles
Kuthekani ukuba uyathandwa emsebenzini?
Isibindi se-Goose, izakhiwo eziwusizo
Ngaba isondo sikhuselekile ngexesha lokukhulelwa?
Iklabishi ihamba kwi-multivariate